warkii.com » Madaxweynaha Xidhiidhka Kubadda Cagta France Oo Jabiyey Derbigii Faquuqa Ee Lagu Hayey Karim Benzema
Madaxweynaha Xidhiidhka Kubadda Cagta France Oo Jabiyey Derbigii Faquuqa Ee Lagu Hayey Karim Benzema
Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Faransiiska (FFF), Noel Le Graet ayaa ka hadlay xiddiga Real Madrid ee Karim Benzema oo xili ciyaareedkiisii ugu wanaagsanaa ku naaloonaya, isla markaana Los Blancos ku hoggaamiyey horyaalka LaLiga.
Weeraryahankan ayaa xulka qaranka France laga saaray sannadkii 2015 kaddib markii lagu eedeeyey inuu ku lug yeeshay cajalad fadeexad galmo ah oo laga duubay Valbuena, waxaana kiiska oo aanay maxkamaduhu soo gabogabayn dhegaysigiisa markiiba go’aamo gaadhay xidhiidhka oo Benzema ku ciqaabay in aanu dalkooda dib ugu ciyaarin.
Noel Le Graet ayaa ka mid ahaa dadkii sida xun u eedeeyey Benzema oo ku doodaya in aanu shaqo ku lahayn arrinta, hase yeeshee madaxweynaha xidhiidhka ayaa ugu dambayn amaan u jeediyey laacibkan.
Madaxweynuhu waxa uu amaanay bandhigga xiddiga reer France ee xili ciyaareedkan, waxaanu yidhi: “Xili ciyaareed heersare ah ayuu la qaatay Real Madrid. Anigu mar hore ayaan u hambalyeeyey Zinedine Zidane oo tababarihiisa ah.
“Hadda waxa uu Benzema ka mid yahay weeraryahannada ugu wanaagsan dunida.
“Miyuu yahay kan ugu wanaagsan? Anigu ma ihi qofka sheegay taas, sababtoo ah, maan daawanin ciyaar walba. Laakiin wuxuu sannadkan qaatay xilli ciyaareedkiisii ugu wanaagsanaa abid.”
Inkasta oo uu bilowgii hore weerarro culus ku qaaday, haddana Le Graet wuxuu bishii November qiray waxqabadka Benzema, isaga oo yidhi: “Waa ciyaartoy wanaagsan, laakiin xulka qaranka way uga dhamaatay isaga.”
Benzema ayaa markaas ugu jawaabay baraha bulshada, waxaanu u sheegay inuu tusi doono isaga oo soo laabtay, waxaanu yidhi: “Waa inaad ogaato in uu aniga yahay, kaliyana aniga igu xidhan tahay, in xirfaddayda heerka caalami ay u dhamaatay iyo in kale.”